Gabriel Cottage kufutshane nezibhedlele - I-Airbnb
Gabriel Cottage kufutshane nezibhedlele
Lafayette , La, United States
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGigi & Kenny
UGigi & Kenny yi-Superhost
UGigi noKenny basandul' ukongeza olunye uluhlu kwiindawo zabo ze-Airbnb! Kanye emva kwe-Evangeline Suite kukho i-Gabriel Guest Cottage entsha. Le gem incinci iqinisekile ukuba iyakumangalisa.
Ngale ndlu yangasese yeeNdwendwe yasemva kwendlu uya kuba nokufikelela kuyo yonke indawo kunye neshedi ekwabelwana ngayo yokuhlamba impahla ngaphandle komnyango wakho. Indawo ibekwe kakuhle ngomoya omtsha osembindini kunye nobushushu, imigangatho yeenkuni kunye neesilingi, iidrapes, ifanitshala, iiragi kunye noBugcisa obuvela kwihlabathi liphela, izixhobo zombane ezibandakanya uluhlu lwegesi, indawo yokugcina eninzi, kunye nemithwalo yokukhanya kwendalo!
Iyakwazi ukulala ngokukhululekileyo ngabantu abadala aba-2 (i-sofa inokuhlala umntwana oyi-1)
1- Queen inkumbulo foam umatrasi
1- ipakethe-kwaye udlale
I-1 - indawo echongiweyo yokupaka ngaphandle kwesitalato ekhoyo.
42" HDTV ene-I-Netflix, I-Hulu, I-Amazon Prime Video
4.93 out of 5 stars from 70 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-70
Sibekwe kwindawo eyimbali yaseLaplace. Yakhiwe ngeminyaka yoo-1930s, le ndawo kaKumkanikazi u-Anne yeVictorian ime ngokugqibeleleyo kwisitrato esizolileyo esinemithi ye-oki esele ikhulile kunye ne-camellias zomthonyama, kunye nelizwe elitshisayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Gigi & Kenny
My husband and I recently returned home to Lafayette after spending our first retirement years in Kentucky and Texas. We are Louisiana natives with French and Spanish heritage.
Kenny does the day-to-day upkeep of our AirBnb’s & other rentals and Gisele manages the bookings and communication along with her part- time job as a Homehealth Therapist.
We enjoy riding bikes, walking and taking advantage of the wealth of music, restaurants, and nature that South Louisiana has to offer. We can't wait to host you!
My husband and I recently returned home to Lafayette after spending our first retirement years in Kentucky and Texas. We are Louisiana natives with French and Spanish heritage.…
Sobabini sithathe umhlala-phantsi kwimisebenzi yobugqirha. UKenny udlala kwiqela laseTexas Swing elibizwa ngokuthi Misa iwashi kanye ngenyanga. Unokusibona kwiindawo eziqhelekileyo. Sifumaneka ngefowuni okanye ngetekisi nangaliphi na ixesha.
Kukho enye iyunithi ye-Air BnB ngapha kwepatio ukuze ubone ezinye iindwendwe eziza kwaye zihamba. Yithi Molo!
Sobabini sithathe umhlala-phantsi kwimisebenzi yobugqirha. UKenny udlala kwiqela laseTexas Swing elibizwa ngokuthi Misa iwashi kanye ngenyanga. Unokusibona kwiindawo eziqhelekileyo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lafayette